AH: ဟောဒီမှာ တရုတ်ပြည်က စူပါဟီးရိုး မယ်
ဟောဒီမှာ တရုတ်ပြည်က စူပါဟီးရိုး မယ်
Marvel ကာတွန်းကားတွေထဲမှာ Wolver Ring၊ Iron Man၊ Super Man စတဲ့ စူပါဟီးရိုးတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီးတွေပေါ့။ စူပါဟီးရိုးတွေ အပြင်မှာ တကယ်ရှိပါသလား? စွမ်းအားရှင် (မြန်မာပြည်မှ စွမ်းအားရှင်များကို မဆိုလို) ကြီးတွေမှာ သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာစွမ်းအား၊ ပါဝါတွေတဲ့ အကူအညီလိုနေတဲ့ လူတွေကို အကူအညီတွေ ပေးကြပါတယ်။ ဟောဒီမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဘေဂျင်းမြို့က စူပါဟီးရိုး မိန်းကလေးပါတဲ့။ သူ့မရဲ့ နာမည်ကိုတော့ ကျိကျင်း မိန်းကလေး (သို့မဟုတ်) Chinese Redbud Women လို့ သူ့မဟာသူမ နာမည်ပေးထားပါသတဲ့။
အဆိုပါ စူပါဟီးရိုးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ခရစ်စမတ် မတိုင်ခင်တုန်းက ဘေဂျင်း ဘူတာရုံမှာ နေရာစမရှိတဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေသူတွေကို အ၀တ်အထည်တွေ၊ ငွေကြေးတွေ ထောက်ပံပေးပါသတဲ့။ သို့ပေမယ့် ခမျာလေးမှာတော့ သူများတွေကိုသာ အ၀တ်ထူထူတွေပေးတယ်၊ သူကိုယ်တိုင်တော့ ချမ်းချမ်းစီးစီး ဒီဇင်ဘာလမှာ အ၀တ်အစား လုံးလုံးခြုံခြုံ မ၀တ်နိုင်ရှာပါဘူး။ လှလည်း လှချင်တယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ဘာစွမ်းအားတွေရှိလဲတော့ ဘာမှ ပြောမထားလို့ ဘာမှ မသိပါဘူး။
သူမကို ဘယ်သူများလည်းလို့ လူတော်တော်များများက သိချင်ကြပေမယ့် သူမကတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို ထုတ်ဖော်မပြောဖူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူမရဲ့ ကူညီမှု့တွေကို မိုက်ခရိုဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတော့ ရေးသားထားပါသတဲ့။ သူမကတော့ နာမည်ကြီးချင်လို့မဟုတ်ပဲ လူတွေကို ကူညီချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ စူပါဟီးရိုး လုပ်ရတယ်လို့ ဆိုနေပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သူမကို အားပေးတဲ့ လူတွေ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ အယောက် ၇၀၀၀ ကျော်နေပြီ ဆိုပဲ။
Source : (Link 1, Link 2, Link 3)
Posted by AH at 4/05/2012 05:34:00 PM
မောင်မောင် April 6, 2012 at 4:08 AM
ကောင်မလေးကတော. ချောလည်း ချော စိတ်ထားလည်းတော်တော်ကောင်းတာဘဲ အစ်ကိုရေ။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် April 6, 2012 at 1:35 PM
Unknown April 17, 2012 at 6:32 PM
စတိုင်ကတော့ လန်ထွက် နေတာပါပဲလား..ဟဟ
လမ်းခွဲရက်သူမို့ သွားတွေအကုန်နှုတ်ပစ်လိုက်သည့် သွား...
စားကြဦးမလား ဆူရှီ စစ်သင်္ဘောများ
မိတ်ကပ် အစွမ်း အံမခန်း
တောင်ကိုရီယားက အကျဉ်းထောင်စောင့် စက်ရုပ်
ကိုယ့်ရည်းစားကို တောဝက်နဲ့ မှားပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်လိ...
Punk စတိုင်လ် ဆံပင်ထောင် အနီဆိုးလို့ ငှက်နဲ့မှားပြ...
Difference between Men vs Women
မဲတူ - ၂
မဲတူ - ၁
လျှက်ကြဦးမလား နံရံကပ် ကွတ်ကီများ
2012 တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း ကျော်စွာ ၁၀၀ ထဲက ဦးသိန်းစိန်
နာမည်ပြောင်းဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ သြစတြီးယား က F***ing ရ...
စွန့်စွန့်စားစား ဗီယက်နမ်က ရဲသား
iPhone နဲ့ iPad ကို ၀ယ်ဖို့ ကျောက်ကပ်ရောင်းတဲ့ လူင...
ရိုက်ကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း(ဓာတ်ပုံ) - ၂
ရိုက်ကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း(ဓာတ်ပုံ) - ၁
ထူးထူးခြားခြား ဖိလစ်ပိုင်က Good Friday ပွဲတော်
စမ်းကြဦးမလား ဓားမ ကုထုံး
Jade Buddha Temple သို့ တစ်ခေါက်
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန...
Statement By The White House Press Secretary On Th...
၂၀၁၂ ဧပြီလ ၂ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် အမည်စ...
X-47B (သို့) Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV)
အန်တိုနီယို စီ လို့ ခေါ်တဲ့ အီတလီနိုင်ငံက အသက် ၉၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဖိုးအိုကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်က သူ့မိန်းမဖြစ်...
Borobudur သို့မဟုတ် ဂျာဗားကျွန်းက အမွေအနှစ်တစ်ခု
ကျွန်တော် အခွင့်ကြုံရင် သွားချင်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ Borobudur အင်ဒိုနီးရှားအခေါ် ဘောရောဘုဒေါ လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အံဖွယ်နေရာ တွေထဲက တ...
ဟာသတိုလေးများ - ၈
ရှာနေတာ… မိန်းဖြစ်သူမှ ယောက်ျားကို မေးသည် “ရှင်ဘာလုပ်နေတာ ဒုန်း…” “ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး မိန်းမရယ်.. ငါ့ဟာ ငါ ဒီမှာထိုင်နေတာ.” “ဘာမှ မလ...
အိမ်သာ အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ တက္ကသိုလ်
United Kingdom, Wales က ဆွမ်ဆီး တက္ကသိုလ်မှာတော့ အိမ်သာ အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန် ပိုစတာများကို ကပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီ Swansea...
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးကို Google Earth ကနေ 3D ပုံစံနဲ့ ဖူးကြရအောင်
ဒီနေ့ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို Google Earth ကနေကြည့်နေရင်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို 3D နဲ့ တွေ့လိုက်ရလို့ ပိုစ့်တင်ေ...
နှဦေးတျောလှနျရေး - ၂ - ၂၀၂၁ မတျလ ၂၇ တျောလှနျရေးနမှေ့ာ မွနျမာ၊ ယိုးဒယား၊ ထိုငျဝမျ၊ ဟောငျကောငျ Milk Tea Alliance တှစေုပေါငျးပွီး စနနေေ့ နလေ့ညျ ၂ နာရီ ၄ နာရီအထိ ခြီတကျဆန်ဒပွကွပါတယ...
#THE_LADY - အမစေုမှေးနအေ့ကွို ဂုဏျပွုကဗြာပွိုငျပှဲရဲ့ ပထမဆုရ ကဗြာ ************** ခေါကျရိုးကြိုးနတေဲ့ လူနမှေုအဆငျ့အတနျး ... ကွောကျရိုးကြိုးနတေဲ့ တရားဥပဒဘေော...
နှောငျကွိုးမြား...အပွေ - တကယျဆို လုံလောကျခိုငျခံ့သော ခံနိူငျရညျစှမျးရှိမှ ခဈြခွငျးမတ်ေတာဆိုတဲ့ ရပျဝနျးကို ဖွတျသနျးခဲ့သငျ့တာ... ကနျြရဈခဲ့နိူငျပါ့မလားလို့ စဉျးစားခဲ့သငျ့တာပေါ့။ ဖ...
ရကျပေါငျး ၁၂၇ ရကျတိတိတဲ့ - မင်ျဂလာပါရှငျ~~~ တကယျတော့လညျး ပွညျမွနျမာကွီးမှာ မင်ျဂလာအပေါငျးဆိတျသုနျးသှားခဲ့ပါပွီ။ ရကျပေါငျး ၁၂၇ ရကျတိတိပေါ့...။ ခုခြိနျထိ ပြျောနေ စားနေ သှားနသေူတှရေငျထဲ...
ရှမျးမုနျညငျးခဉျြ (အလှယျနညျး) - ပထမဆုံး ဆိုငျက မုံညငျးခဉျြနှဈထုပျကို တဈလကျမကြျောကြျော အရှညျလေးတှေ ဖွတျပွီး အခြောငျးလေးတှေ ပွနျလှီးပါ။ ပွီးရငျ မံညငျးခဉျြတှကေို ရခေဲသတ်ေတာထဲ ခဏပွောငျးထညျ့...
Shadowsocks with V2Ray Plugin - ပါလီမနျခတျေ ပွညျတျောသာစီမံကိနျး လုပျစဉျက လူတယောကျ အိမျတလုံး ကားတစီး ပိုငျရမယျ ဆိုတဲ့ Slogan မြိုး သှားသတိရလို့ အခုခတျေကတော့ လူတယောကျ VPN Server တလုံး အနည...
- *ငါဟာ ပုံမှနျမဟုတျဘူး ဆိုတာ ငါမသိခဲ့ဘူး* ငါမှေးဖှားခဲ့ရာ ဒသေရဲ့ ရေ မွေ လေ ပုံမမှနျမှုကို ငါမသိခဲ့ဘူး။ ရှာမလို တိမျမညျးတှရေဲ့ အနောကျက အတိတျရဲ့ အရိပျမညျး ...
မြိတ် ကျွန်းစုသို့တစ်ခေါက် - ၂၀၂၁ နှစ်သစ်ကူးသွားပြီးတဲ့ အချိန်လေးမှာ မြိတ်မြို့ကို ရောက်နေတယ်။ မြိတ်ကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်ရောက်တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်လောက်က မြိတ်ကို ...
Facebook ပေါ်က BFF ဂျင်းအကြောင်း... - ခုတစ်လော facebook ပေါ်မှာ ဂျင်းထည့်ခံနေရတာကတော့ 'BFF' ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ... သူ့ရဲ့အရှည်ကောက်က 'Best Friend Forever' ပါ... ဂျင်းထည့်သူတွေက Facebook CEO မာ့ခ်​...